SAADAAL: Liverpool Oo Garaacaysa Arsenal, United Oo Guul Helaysa, Mourinho Oo Soo Kacaya Iyo Saadaasha Kulamada EPL Ee Toddobaadkan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaSAADAAL: Liverpool Oo Garaacaysa Arsenal, United Oo Guul Helaysa, Mourinho Oo Soo Kacaya Iyo Saadaasha Kulamada EPL Ee Toddobaadkan
SAADAAL: Liverpool Oo Garaacaysa Arsenal, United Oo Guul Helaysa, Mourinho Oo Soo Kacaya Iyo Saadaasha Kulamada EPL Ee Toddobaadkan
April 2, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa dib loogu soo laabanayaa kaddib laba toddobaad oo fasaxa kulamada caalamiga ah lagu maqnaa, waxaana dib loogu furayaa ciyaaro adag oo natiijooyinkoodu isbeddel dhab ah ku samayn doonaan miiska kala-sarraynta.
Kooxda hoggaanka haysa ee Manchester City ayaa rajaynaysa in ay kusii dhowaato hanashada koobka, halka Manchester United ay ku faro-adaygayso kaalinteed labaad, laakiin ciyaar adag ayaa sugaysa Liverpool oo Arsenal marti ugu noqonaysa Emirates Stadium.
City ayaa Sabtida u tegaysa Leicester City oo kaalinta saddexaad ku jirta, waxaana haddii ay badiso kooxda tababare Guardiola ay taasi keeni kartaa in Foxes ay ka dhacdo kaalinteeda saddexaad ee horyaalka, haddii ay guul gaadho Leicester na waxa dib u dhici doonta waqtiga ay City koobka xaqiijisan doonto.
Markii ugu dambaysay ee labadan kooxood ay kulmeen oo ahayd bishii September, waxa 5-2 ku badisay Leicester City.
Khabiirka ciyaaraha ee Mark Lawrenson oo saadaaliyey kulamadan ayaa waxa uu markan sheegtay in Man City ay 2-0 ku garaaci doonto Leicester City.
Liverpool oo marti u ah Arsenal oo ay Sabtida ku wada ciyaari doonaan Emirates Stadium ayaa uu Mark Lawrenson saadaaliyey in tababare Jurgen Klopp ay kooxdiisu sare usoo kici doonto oo ay guul 2-1 ah ka gaadhi doonto Gunners.
Manchester United ayaa sii xajisan doonta kaalinteeda labaad waxaanay guul dahabi ah ay ka gaadhi doontaa Brighton iyadoo waliba baqasho la’aan ahaan doonta kulamada xiga haddii saadaasha Mark Lawrenson ay sideeda dhab u noqoto.
Chelsea ayaa sii wadan doonta rikoodhkeeda guul-darro la’aanta waxaanay laba dhibcood oo kaliya u jirsan doontaa Leicester City oo saddexaad ku jirta iyagoo markan West Brom.
Halkan kaga bogo saadaasha Mark Lawrenson ee kulamada toddobaadkan